Thenga i-Bitcoin nge E-Afghanistani ngoko nangoko nangokuKhuselekileyo | Paxful
Thenga i-Bitcoin ngoko nangoko ku E-Afghanistani
Guqula i-Afghan Afghani yakho (AFN) iye kwi-BTC namhlanje usebenzisa u-Paxful, iplatfom ye-Bitcoin ehamba phambili ekuxhasweni ngabantu emhlabeni. Ngokungafaniyo notshintshiselwano lwe-Bitcoin oluqhelekileyo, senze wakwazi ukuthenga i-BTC phantsi kwexabiso lentengiso langoku nangaphandle kwemirhumo eyongezelelekileyo.
Ukukhusela imali yakho yeyona nto iphambili kuthi kwaye yiyo loo nto iakhawunti yakho ikhuselwe ziiprotokoli zokukhusela ezingqingqwa njengogunyaziso lwenyathelo lesi-2. Ngokusebenzisana kwethu ne-Chainalysis kunye ne-Group-IB, ungahlala ukhululekile usazi ukuba u-Paxful enye yeeplatfom ezikhuselekileyo onokuthenga kuzo i-Bitcoin.
Ngoko, sukulibazisa kwaye yenza iakhawunti ku-Paxful. Khetha kumaxabiso e-Bitcoin angenakubaleka uze uqalise ukurhweba ngokukhululekileyo kwidesktophu yakho, kwilephtophu, ngezixhobo ze-iOS, okanye ze-Android!
Asinawo amaxabiso e I-Afghani yaseAfghanistan kwi E-Afghanistani okwangoku. Apha ngezantsi ngamaxabiso onganomdla kuwo.
Iindlela zokubhatala eziphambili kwi E-Afghanistani
U-Paxful ukwenza kube lula kwaye kukhuseleke ukuba uthenge nokuba ube nekhriptokharensi. Fumana elona xabiso ligqibeleleyo apha ngezantsi uze uthenge ikhriptokharensi nge International Wire Transfer (SWIFT) namhlanje.
Thenga i-Bitcoin ngo International Wire Transfer (SWIFT)
Nceda abanye abantu base E-Afghanistani bafumane i-Bitcoin uze ufumane iingeniso EZINKULU ezifikelela kwi 60% kwintengiso nganye. Qalisa ukuthengisa ngeakhawunti yakho yebhanki yasekuhlaleni ngoku, jonga isikhokelo sethu sasimahla. U-Paxful ufumana abathengi be-Bitcoin abangama-1000 base E-Afghanistani mihla le.
Unabantu abaninzi obaziyo abafuna ukuthenga i-Bitcoin e E-Afghanistani? Nge Kiyoski yakho ye-Bitcoin nenkqubo yeHlakani ufumana umvuzo we-2% kurhwebo ngalunye ngonaphakade ngokwabelana nje ngelinki. Qalisa ngoku.